စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၂၇ ) ( ရိုဟင်ဂျာ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Different » စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၂၇ ) ( ရိုဟင်ဂျာ )
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၂၇ ) ( ရိုဟင်ဂျာ )
Posted by Foreign Resident on Jun 11, 2012 in Think Different | 108 comments
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၂၇ )
( ရိုဟင်ဂျာ )
ရွာသူား တို့ရေ ။
အဘ က အပျင်းကြီးတဲ့ အတွက် ၊
Post တင်ခဲ ပါတယ်ကွယ် ။
သူများတင်ထားတဲ့ Post တွေမှာ ၊
အဘ နှင့် သဘောမညီတဲ့ ၊
အချက်လေးတွေ တွေ့မှသာ ၊
အဲဒါကို အကြောင်းပြုပြီး Post တင်တာ ၊
ဒါပေမယ့် ၊ ဒီတစ်ခါတော့ ၊
ဘယ် ရွာသူားကမှ လက်ရှိအခြေအနေကို ၊
ဒီလို အတွေးအခေါ်ဆန်ဆန် သုံးသပ်ချက်မျိုး ၊
စရေးလာတာ မတွေ့ရတဲ့အတွက်က တကြောင်း ၊
အရမ်း လိုအပ်လာပြီလို့ ထင်တာက တကြောင်းကြောင့် ၊
ထုံးစံ အတိုင်းပါပဲ ၊
လူမိုက်ကြီး အဘကပဲ အမုန်းခံ ၊ အဆဲခံ ပြီး ၊
Post ရေးတင်လိုက်ရပါတယ် ။
သာသာလေးပဲ ဆဲကြပါနော် ။
အဘ ရဲ့ Personal အမြင်လေးပါ ။
အခု ရိုဟင်ဂျာ အရေးအခင်းကို ၊
အဘ ကတော့ ၊
လုပ်နေတယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။
အမေစု နိုဘယ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆု
သွားယူမယ့် အချိန်နှင့် ကွက်တိ ၊
တမင် အချိန်ကိုက် လုပ်တာပါ ။
အခုကိုပဲ ၊ အမေစု နိုင်ငံခြားရောက်တာနှင့် ၊
ရှိသမျှ သတင်းထောက် အားလုံးက ၊
အမေစုကို ဝိုင်းမေးတော့မယ် ။
၁ ။ ရိုဟင်ဂျာ အရေးအခင်းကို ဘယ်လိုမြင်လဲ ။
၂ ။ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ဘယ်လိုသဘောထားလဲ ။
၃ ။ အစိုးရတပ်တွေရဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်
ရက်ရက်စက်စက် နှိမ်နင်းမှုကို ဘယ်လိုသဘောထားလဲ ။
သူတို့ရဲ့ ပထမ ရည်မှန်းချက် / အကွက် ဖြစ်တဲ့ ၊
တကမ္ဘာလုံးမှာ ရိုဟင်ဂျာ အသံဆူညံစေမယ့် ၊
ရိုဟင်ဂျာ အရေး Awareness ရစေချင်တဲ့ ၊
ရည်မှန်းချက် အောင်မြင်သွားပြီ ။
သူတို့အကြိုက်ဆုံး အခြေအနေ / ဒုတိယရွေ့ကွက်ကတော့ ၊
ရိုဟင်ဂျာတွေက တမင်တကာ ရန်စ / အသေခံ စတေး ။
အစိုးရတပ် နှင့် ရခိုင်တွေက ဒေါသအလျှောက် ၊
ရိုဟင်ဂျာတွေကို ရက်ရက်စက်စက် နှိမ်နင်း ။
ပြီးရင် အမေစု နိုင်ငံခြားရောက်တာနှင့် အမေစု ကို ၊
အစိုးရတပ်တွေရဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် ၊
ဘယ်လိုသဘောထားလဲ ဝိုင်းမေး ။
အဲဒီမှာ အမေစု အခု သွားယူမှာက ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုလေ ၊
ဘယ်လိုလုပ်ပြီး လူသတ်နှိမ်နင်းတာကို ထောက်ခံလို့ ရမလဲ ။
အဲဒီတော့ ၊ အမေစုက မလွဲမရှောင်သာ အစိုးရတပ်ကို ရှုံ့ချရ ။
လူနည်းစု အသတ်ခံရသူများဘက်က ရပ်တည်ရ ။
အမေစု နှင့် စစ်တပ် ပက်ပက်စက်စက် ခွာပြဲ ။
ရိုဟင်ဂျာတွေဘက်မှာ နှုတ်မရအောင် ခြေတွေကျွံဝင် ။
နိုင်ငံတကာနှင့် အမေစုရဲ့ ထောက်ခံမှုနှင့်
ရိုဟင်ဂျာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ မွတ်ဆလင် အထူးဒေသ တောင်း ။
အကွက်ကလေးက လှမှလှ ။
ခပ်ရိုးရိုး Emotional ဆန်ဆန် ၊
အစိုးရတပ်ကို ရိုဟင်ဂျာတွေကို အတင်းသတ်ခိုင်း ။
အမေစုကို အားမရတဲ့အတွက် ရှုံ့ချ / ဆဲ ။
နောက်ဆုံး Chess Mate ဆိုပြီး ၊
ရိုဟင်ဂျာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ၊
မွတ်ဆလင် ပြည်နယ် ပေးလိုက်ရတော့မှ ၊
ဟာ ကနဲဆိုပြီး ၊
သဘောတွေပေါက် ၊ နောင်တတွေရ ။
ဒါပေမယ့် နောက်ကျ ။
အင်းးး အဲလို အကြံအစည်သာ တကယ်ရှိရိုးမှန်ရင် ၊
ဒီတစ်ရက် နှစ်ရက်အတွင်းမှာ ၊
အသေခံဖို့ရှိတယ် ထင်တယ် ။
ဒါပေမယ့် ၊ အဘ စိတ်မပူပါဘူး ။
အဘ ထင်တယ် ၊ အစိုးရ ၊ စစ်တပ် နှင့် အမေစု ကော ၊
အဲဒီ အကွက်တွေမြင်လို့ ချုပ်တီးနေကြတယ် ထင်တယ် ။
စစ်တပ်က ရဲတပ်ဖွဲ့ ကိုပဲ အဓိက ရှင်းခိုင်းတယ် ။
အဓိက ပစ်တဲ့ ရဲတွေ ကိုင်တွယ်နေတာကလည်း ၊
ရိုးရိုး လေးတောင့်ထိုး ရိုင်ဖယ်တွေ များတယ် ။
Automatic Assault Rifle တွေ မဟုတ်ဘူး ။
ဒီတော့ နိုင်ငံတကာ စံ အရ လက်ခံနိုင်တယ် ။
အမေစု ကလည်း အလွန်အကျွံ
ဘာမှမပြောပဲ နှုတ်ပိတ်နေတယ် ။
ဒါပေမယ့် ၊ အမေစု ရဲ့သဘောထားကို ၊
အမေစု ရဲ့ သားတွေဖြစ်တဲ့
၈၈ ကျောင်းသားတွေကတဆင့် ၊
သွယ်ဝိုက်ပြီး ပြောထားတယ် ။
၈၈ ကျောင်းသား ကိုမြအေး တောင်မှ ၊
သူ့သမီး ဝေနှင်းပွင့်ဝသုန်ကိုတောင် ၊
နောက်ဆုတ်နေဖို့ ၊ နှုတ်ပိတ်နေဖို့ ပြောထားလိုက်ပြီ ။
အခြေအနေတွေ Escalated ဖြစ်လာမှာကို ၊
သေချာစောင့်ကြည့် သုံးသပ်နေပုံပဲ ။
အမေစု မေါ်လဝီ ဆရာတွေနှင့် တွေ့ဆုံတုံးက ပြောခဲ့တဲ့ ၊
နောက်ကွယ်က အကြံအစည်တွေ ရှိမှာကို သံသယ ဖြစ်မိတယ် ဆိုတာ ၊
အဘ အထင် အမေစုက စစ်တပ်ကို သံသယ ရှိတာ မဟုတ်ပဲ ၊
အစွန်းရောက် ရိုဟင်ဂျာတွေကို သံသယ ရှိတာကိုပဲ ဆိုလိုပုံရတယ် ။
နောက်ပြီး စစ်တပ်ရဲ့ အခုတုန့်ပြန်နေပုံ ကလည်း ၊
အာဏာပြန်သိမ်းချင်လို့ လုပ်နေပုံ လုံးဝမပေါက်ဘူး ။
တော်တော်ကို ထိန်းထိန်း သိမ်းသိမ်း လုပ်နေတယ် ။
အစိုးရ ၊ စစ်တပ် နှင့် အမေစု တို့ ၊
အချိတ်အဆက် မိမိ ၊ ဟန်ချက်ညီညီ ၊
သေသေချာချာ ညှိနှိုင်းပြီး တုန့်ပြန်နေပုံပဲ ။
ဒါပေမယ့် အစွန်းရောက် ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ ၊
ရွေ့ကွက်တွေကလည်း အရမ်း ပိုင်နိုင်နေတယ် ။
( ဥပမာ ။ ။ ကိုယ့်အိမ် ကိုယ်မီးရှို့တာတွေ )
အမိ မြန်မာပြည် ကံကောင်းပါစေလို့ပဲ ၊
ရွာသူားတွေကို တိုက်တွန်းလိုတာကတော့ ။
စည်းချက်အတိုင်း လိုက်မက မိဖို့ပါပဲ ။
ခဏလေး သည်းခံ ချုပ်တည်းပြီး စောင့်ကြည့်ဖို့ပါပဲ ။
အဘ ယုံကြည်ပါတယ် ။ အာမခံပါတယ် ။
ဘင်္ဂလားဒေရှ် အစိုးရတပ်တွေ ပါ ၊
ဒီကိစ္စထဲ ဝင်မပါလာ မချင်းတော့ ။
အဘတို့ရဲ့ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်
Battle Hardened ဖြစ်နေတဲ့ ၊
ဒီ အစွန်းရောက် ရိုဟင်ဂျာတွေကို ၊
ကောင်းကောင်း Handle လုပ်နိုင်မှာပါ ။
ဘယ် မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ယောက်မှ
လာကူစရာ မလိုပါဘူး ။
စိတ်ဓါတ် နှင့် ငွေကြေးသာ ထောက်ကူဖို့ပြင်ထားပါ ။
လူကိုယ်တိုင် လာကူပြီး ဒေါသအလျောက်
လက်လွန်ခြေလွန်တွေ ဖြစ်သွားတော့မှသာ ။
အဘ တို့ မြန်မာနိုင်ငံကြီး သမိုင်းတရားခံ ဖြစ်သွားမှာ ။
သူတို့ရဲ့ အဓိက ဦးတည်ချက်က ၊
နိုင်ငံတကာက လေးစားတဲ့ ၊
နိုင်ငံတကာရဲ့ ဒီမိုကရေစီ စံ ( Icon ) ထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ၊
အမေစုကို သူတို့ဖက်ကို ခြေကျွံသွားအောင် ခြောက်သွင်းနေတာပါ ။
အမေစု သူတို့ ထောင်ခြောက်ထဲ ဝင်သွားရင် ၊
Chess Mate ပွဲပြီးသွားပါပြီ ။
သူတို့ ရိုဟင်ဂျာတွေဘက်က ၊
လူဦးရေ တစ်သန်းလောက်ထဲက ၊
လူ တစ်ထောင် နှစ်ထောင် စတေးဖို့ ၊
ဝန်လေးနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။
လိမ္မာ ပါးနပ်ပါ ။
မြို့ မေတ္တာထင်မကပဲ ။
နိုင်ငံ မေတ္တာ အထိပါရပြီး ၊
ဝိုင်း ဆဲ တာ ခံရအုန်းမယ် ထင်တယ် ။
တောယုံဆဲတာနှင့်တော့ မတိုးတော့တဲ့ ။
အဘ ဖောကို အပြည့် အ၀ ထောက်ခံပါတယ်။ ကိုယ့် ဘာသာ ကို တော့ ရေးတေးတေး တွေးမိပေမယ့် အဘ ရှင်းပြ မှ ပိုပြီး ရှင်းရှင်း လေး မြင် မိတယ်။ သမတကြီးရော ၊ အမေစု ရော ကျဉ်းထဲ ကြပ်ထဲ ရောက်နေ သလို ၊ ထိန်းထိန်း သိမ်းသိမ်း ပြောဆို ပြုမူ နေရတာမို့ အားလုံး နားလည် ပေးဖို့ လို ပါတယ်။ ဒီကြားထဲ မီဒီယာတွေ ကို ၀မ်နိမ် ပေး တဲ့ ဟို လူကြီး ကတော့အတော် လွန်ပါတယ်။ အရင် ထဲက ရေဒီယို ဆိုရင် ဘီဘီ စီ ပဲ နားထောင် တတ်ကြတဲ့ လူတွေ အတွက် ဒီ မြန်မာ မီဒီယာတွေ ကမှ အဖြစ် မှန်တွေ မတင်ပြ နိုင် ရင် ဘယ်လိုလုပ် အမှန်တရား ကို သိနိုင်ပါတော့ မလဲ။
ရီရလွန်းလို့ Share တာပါ ။
နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးက မှူးဇော်က ဒီလို သတင်းထုတ်ပြန်တယ် ။
ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့ ၁၅၁၅ နာရီချိန်မှစ၍ စစ်တွေလေယာဉ်ကွင်း၊
စစ်တွေရထားလမ်း (၂၀)မိုင် တောက်လျှောက်အား တပ်မတော်မှ တပ်ရင်းများနှင့်
လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်နေ ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အဲဒါကို ကျေးဇူးရှင် တစ်ယောက်က ဒီလို လှောင်ထားတယ် ။
Ko Thant ကုလားနည်းနည်းပြောမယ်…
သူဘဲ အွန်လိုင်းကနေ လေကြီးလေကြယ်နဲ့
တည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင် စီစဉ်နေတယ်လည်းပြောတယ် ။
အခု ကုလားတို့ မောင်တောကနေ ဆိုက်တွေ ကိုရောက်လားပြီ၊
အခုထိ ထိမ်းလို့သိမ်းလို့ မရသေးဘူးလား..
ဖေ့စ်ဘွတ် ကနေပြီးတော့ မရှင်းတတ်ဘူး..
မီးရှို့ ပြီးဘဲ အပြတ်ရှင်းတတ်တယ်..
kyaw thu soe naing says:
ကျွန်တော်တို့ ကတော့ ချချင်တီးချင်နေတာဆိုတော့ သဘောထားကွဲ သလို ပဲ၊ ဒါပေမယ့်တော်တော် ကြိုက်ပါတယ် ဘာလို့လဲဆို တော့ နိူင်ငံရေးခေါင်းဆာင်တွေ ကြားထဲ အမြင် ကြည်လင်စေလို့ပါ၊ ခုလိုအချိန်မှာဒေါ်စု အားပေးသူတွေက အစိုးလကို သံသရတွေဝင်၊ အစိုးရထောာက်ခံ သူတ့ချို့ ကဒေါ်စု ကိုဂလန့်တွေ တိုက် နဲ့သွေး နီး ရမယ့် အချိန်မှာသွေးကွဲနေ ကြတာကို စိတ်မကောင်းစွာတွေ့နေရလို့ ပါ၊
နဂါးမင်းစစ်ဆင်ရေး ဆိုပြီးနှင်ထုတ်ခဲ.တာ တစ်ရာလောက်ထွက်သွားပြီးတစ်ထောင်မကပြန်ဝင်လာတဲ.အကောင်တွေပါ
Ngatu Cangmah says:
မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် လက်တွဲပြီး နိုင်ငံတော်ကြီးကို ကာကွယ်ပေးပါ
ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် လက်တွဲပြီး နိုင်ငံတော်ကြီး တိုးတက်အောင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးပါ
အဘဖော.. ပို့စ်လေးကို ဖတ်လိုက်ရတော့ …. သိပ်အားရှိသွားတာပဲ။ နေပူပူမှာ ရင်ပူပြီး ရေငတ်နေတဲ့ ရွာသူ ရွာသားတွေကို ရေးအေးလေးတိုက်လိုက်သလိုပါပဲ။ ဖတ်ရင်းနဲ့ စိတ်ထဲမှာ ပူမိတာတစ်ခုတော့ ရှိတယ်။ အဘဖောပြောသလို.. သူတို့ စဉ်းစားကောင်းပ။ အဘပြောသလို.. သူတို့ ပြင်ထားကောင်းပ။ အဘပြောသလို သူတို့လုပ်ကောင်းပ။ အဘပြောသလို ဖြစ်လာကောင်းပ။
black cloudak says:
However +1 for Mr.President for showing his deeply concern and -1 for Daw Su for acting like ‘We are somebody that she use to know’.
သူများဆီက ကူးယူပြီး ထပ်မံအားဖြည့်ပါမယ် ။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းရရင်ပြီးရော၊ နာမည်ကြီးရင်ပြီးရောဆိုတာထက် ပိုကျော်လွန်ပြီး ……nigimi77 မှတဆင့်တင်ထားပါ…
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဒီရက်ပိုင်း (၄) ရက်ခန့်မျောသွား..
စာရှုသူ..ဦး,ကို,မောင်,မ Internet တို့…ချင့်ယုံကြပါကုန်….
အဘပြောတော့မှ ကိုယ်ဒေါသကအလွန်ဖြစ်သွားတော့တယ် .. လူငယ်တွေဆိုတော့ မစဉ်းစားပဲ ဒေါသရှေ့ထားမိတာခွင့်လွက်စေချင်ပါတယ် … တပ်မတော်နဲ့ရဲများကလည်း ဒီမိုကရေစီ စနစ်ပြည့်ဝစွာနဲ့ မြန်မာပြည်ကြီး နာမည်မပျက်စီးအောင် အစွမ်းကုန်စိတ်တွေထိန်းပြီး စောင့်ရှောက်နေတာပါ .. ဘေးကနေ အားမလိုအားမရနဲ့ သေနတ်တွေလုပြီး ဘင်္ဂါလီတွေကို ပစ်သတ်ချင်နေတာ ….. အဘပြောသလိုတော့ အကွက်ကျကျက အခုမှထင်တယ် ကုလားသုံးယောက် လူသတ် စော်ကားတာ တောင်ကုတ်မှာ လူ( ၁၀ ) ယောက်အသတ်ခံရတာတွေကျတော့ အကွက်ကျကျလို့ပြောလို့မရဘူးနော် .. သူတို့ဘက်က ( ၁၀ ) သေလို့လက်စားချေတာလို့လည်း တွေးမိပြန်တယ် .. အောက်လင့်က ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ကြည့်မိပြန်တော့လည်း ဓားတောင်သွေးထားမိတယ် .. http://www.facebook.com/video/video.php?v=358677460866666
အဲဒါကြောင့် သည်းခံကြ…သည်းခံကြလို.ပြောတာ။ ဒီရိုဟင်ဂျာတွေ ဘယ်လောက်ပဲ ကိုယ့်နိုင်ငံသားရခိုင်
တွေကို စော်ကားနေပါစေ..ဘုန်းကြီးတွေကို လည်လှီးသတ်နေပါစေ..ဒေါ်စုပြောတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်
ကသာ သူတို.အပေါ်အောင်နိုင်စေမှာပါ..ကျနော်တို.ရဲ. ဗုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားကလည်း သည်းခံခြင်း လမ်းစဉ်ကို
ကျင့်သုံးခဲ့တာပဲ။ အောင်ခြင်းရှစ်ပါးမှာတောင် သည်းခံခြင်းတရားကို အဓိကထားပြီးကျင့်သုံးခဲ့တာပါ..
နောက်ဆုံး ရခိုင်ပြည်နယ်တနယ်လုံး ရိုဟင်ဂျာလက်ထဲပါသွားလည်း ဘာဖြစ်လည်းနော..မြန်မာနိုင်ငံကြီး
အကျယ်ကြီးပါ တခြားပြည်နယ်တွေ နေလို.ရသေးတာပဲ..အခုတောင် မြေဈေး အိမ်ဈေးတွေ အရမ်းတက်နေ
တာ ကိုယ်တောင် ၀ယ်နိုင်သေးတာမဟုတ်ဘူး..ပါသွားလည်း အေးတာပဲ။ အဲဒီတော့ လူမျိုးရေးနှင့်ဘာသာ
ဒီကောင်တွေရဲ့ မာယာလှည့်ကွက် ထောင်ချောက်တွေကိုမြင်နေပါတယ်၊ဒါပေမယ့် အဘဖောလိုအကျိုးးသင့်
အကြောင်းသင့်ချပြဖို့ မရဲခဲ့ပါဘူး နိုင်ငံခေါင်ဆောင်ပိုင်းတွေလည်းသိရှိထားလို့ အကွက်ကျကျတုန့်ပြန်နေတယ်
မှာသေချာပါတယ်..အခုအချိန်အထိ သူတို့ဖြစ်စေချင်သလို ရှေ့တန်းတင်စတေးခံထားတဲ့ မူစလင်ရွာသားတွေ ရက်ရက်စက်စက်
သတ်ဖြတ်နှိပ်ကွပ်ခံရတာတွေ ဖြစ်မလာတော့ ကမ္ဘာ ကိုချပြဖို့ ကြံထားတဲ့အကြံမအောင်ဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ။
( ဒီနေရာမှာ လူကြီးတွေကတော့ဘယ်လိုစီစဉ်ထားတယ်မသိဘူး..ကျနော်သာဆိုရင် အခုသူတို့လုပ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်
တွေကိုအချိန်တိုတိုအတွင်းမှာပြီးသွားအောင်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း မလုပ်ပဲ .. အချိန်ကိုကြာနိုင်သမျှကြာအောင်ဆွဲပြီးမှ
ညင်ညင်သာသာလေးနဲ့ တရက်နဲနဲစီစားပစ်မယ်ဗျာ…:P )
ဒီလိုဖြစ်လာနိုင်ခြေကိုကြိုတွက်ဆပြီး အခြားပို့စ်တွေရဲ့ ကွန်မန့် တချို့ထဲမှာလည်းကျနော်သတိပေးထားပါတယ်
ဒါကြောင့်..ကျနော်တို့နိုင်ငံထဲမှာ ဒီလိုအကြမ်းဖက်သမားတွေရောက်လာခဲ့ရင် ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့မူစလင်ဘာသာဝင်တွေက
ကျနော်တို့ထက်အရင်ဆုံးသိနိုင်မှာဖြစ်လို့ ဖေါ်ထုတ်တားဆီးဖို့ရာအတွက် တာဝန်အရှိဆုံးဆိုတာလည်း သိထားသင့်ကြပါတယ်
နေဦးဗျို့ဦး ဆိုက်ဒ်ထဲမှာ နာမည်တူ အကောင့်ဖွင့်လို့ ရတယ်လား.. အပေါ်မှာ ဟိန်းထက် တစ်ယောက် မန့် ထားတယ်.. အဲဒါကျွန်တော် ဟုတ်ဘူး… သေချာ သိချင်လို့ ပါ
သူကြီးရေ ဟုတ်နေတယ်ဗျ ။
အဲဒီ ကိစ္စ ရှင်းပေးလိုက်ပါဦး ။
ဟိန်းလတ်ပါ (hein latt) …
ကိုစနေတွေ့တဲ့ဟိန်းလတ်(hein latt) ရဲ့ အပေါ်အစပိုင်း ကွန်မန့်တွေထဲမှာ ကျော်မဖတ်ပဲသေချာရှာကြည့်ရင်
hein htet ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်..အပေါ်ကနေစရေတွက်ရင် ၄ ခုမြောက်ကွန်မန့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သေချာကြည့်ရင် hein htet ၂ ခုကမတူပါဘူး။
ှShare သွားပါဘီ။ပြောသာပြောရတယ် ဘယ်ဆိုဒ်သွားတင်ရမှန်းတောင်မသိ။
ထပ်ပြောမယ် အဘရေ ဆိုဒ်တော်တော်များများမှာကို အဘပို(စ်)ကိုတွေ.ရပါတယ်။
အဘရေးခဲ့သမျှ စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် စီးရီးပို့စ်တွေဟာ
တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအကျိုးကို ယေဘုယျကျကျ သုံးသပ်ပြီး
မဖြစ်သင့်တာတွေ မဖြစ်ရအောင် စေတနာအရင်းခံ
ရေးသားထားမယ် ဖတ်ကြည့်တာနဲ့ကို ထင်ရှားလွန်းပါတယ်ဗျာ။
အဘလို နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး ဘက်စုံ ထူးချွန်တဲ့
အတွေးအမြင်ရှိတဲ့သူက ကျွန်တော်တို့ အသိုက်အ၀န်းဖြစ်တဲ့
အမြင့်ဆုံး လှေသူကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက် ပိုလို့တိုးပြီး ဂုဏ်ယူပါတယ်.. အဘ…
အဘစဉ်းစားစေလိုတယ်ဆိုတော့မှ ထစ်ခနဲရှိ ဒေါသနဲ့
တွေးတတ်တဲ့ ကျနော်ရဲ့ အတွေးကိုလည်း ပြောင်းလဲပစ်ရတော့မယ်
အဘရေ… အဘဒီထက်မက အောင်မြင်မှုတွေ အများကြီးရရှိပါစေ…
သင့်ကြောင့် ….မသာပုံများ Online ပေါ်မတက်ပါစေနှင့်
သူ့ Comment က စစချင်း သဘောမပေါက်ဘူး ။
Voice Of Myanmar ထဲက
” ရခိုင်မှာ လုံခြုံရေးတွေက –ု –ား တွေကို ဆော်နေပါပြီ ။
သင့်ကြောင့် –ု –ား မသာပုံများ on line ပေါ်မတက်ပါစေနှင့် ။
တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုး ပုံရိပ်အတွက် အရေးကြီးပါသည် ”
ဆိုတာနှင့် တွဲဖတ်မှ သဘောပေါက်သွားတော့တယ် ။
ကျမတော့ များများပြန့်အောင် မျက်နှာစာအုပ်ကနေ ဖြန့်လိုက်ပြီ။
ကျမ လက်မက 221 ခုမြောက်ပါ။
ကျမတို့ အားမလိုအားမရဖြစ်နေတာတွေ ခုမှရှင်းတယ်။ကျေးကျေးပါ။
အော်……..ဒါတွေကြောင့် ခိုင်ခိုင်လေး ကြောက်တာဖြစ်မယ်။:D
” ဒါတွေကြောင့် ခိုင်ခိုင်လေး ကြောက်တာဖြစ်မယ်။:D ”
မ ပဒုမ္မာ ကလည်း အသာလုပ်ပါဗျာ ။
တော်ကြာ Khaing Khaing လေး ကြားသွားပါအုန်းမယ် ။
အဆဲခံ ချင်တဲ့ ဆန္ဒမပြည့်လို့ ကိုဖောကိုယ်စား
စိတ်မကောင်း ပါဘူး တကယ်အဆဲခံ ချင်ရင်
နောက်ဆို ဒီလို ပို့စ် မတင်ပါနဲ့ အခုတော့ ဂုဏ်ထူးမှတ်
တောင်မကဘူး အမှတ်ပြည့် ၁၀၀/၁၀၀ ချီးမြှင့်စေသတည်း
Eleven Media Group website မှာ FR ရဲ့ ပို့စ်ကို Victor Aung ဆိုသူက ကွန်မန့် တင်ထားတာ တွေ့ပါတယ်။များများပြန့်ရင် lateral thinking ရကြတဲ့အတွက် သွေးမဆူတော့ဘဲ ဆင်ခြင်လာနိုင်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
မစဉ်းစားတော့ဘူး ။ ယုံလိုက်တော့မယ် ။
ကျွန်တော်လဲ share လုပ်ချင်ပါတယ် ခွင့်ပြုပါ။
ထောင်ချောင်ကို ဂယ်ပေါက်မှတ်ပြီး ၀င်တိုးမိမှာ စိုးရိမ်မိပါ၏
ဟပေးထားတာကို အဟုတ်မှတ်ပြီးဝင်မိလို့ သတ်ကွင်းထဲရောက်သွားမှာ စိုးမိပါ၏။
” လက်မတွေ များလှချေလား။ ကျွန်မ လဲ FB ပေါ်မှာ တင်ပါရစေ ”
” ထပ်ပြောမယ် အဘရေ ဆိုဒ်တော်တော်များများမှာကို အဘပို(စ်)ကိုတွေ.ရပါတယ် ”
” ကျမတော့ များများပြန့်အောင် မျက်နှာစာအုပ်ကနေ ဖြန့်လိုက်ပြီ။
ကျမ လက်မက 221 ခုမြောက်ပါ ”
ဟုတ်တယ် အရီးလတ်ရေ ၊
ကျနော်လည်း အရီးလတ်ပြောမှ သတိထားမိပြီး ၊
စပြီး စောင့်ကြည့်နေမိတယ် ။
Post တစ်ခုက တရက် ( ၂၄ နာရီ ) အတွင်းမှာ ၊
လက်မ အပေါင်း ၂၅၄ ခု နှင့် အနှုတ် ၈ ခု ရတယ်ဆိုတော့ ၊
MG အနေ နှင့် Record တစ်ခု ဖြစ်သွားလောက်တယ် ။
အဓိက ကတော့ Share တာတွေ အရမ်းများပြီး ၊
Captain America ပြောသလိုပါပဲ ၊
Face Book Group အတော်များများကို ပျံ့သွားလို့ပါ ။
အဲဒီမှာ လူသစ်တွေ တော်တော်များများ ဝင်ဖတ်ပြီး ပေးသွားတာပါ ။
ဒီနေ့မှ စဝင်ပုံရတဲ့ ရွာသူား လူသစ်ပေါင်း မြောက်များစွာကို လည်း ၊
လူသစ်တွေ တော်တော်ဝင်လာတော့ ၊
သူကြီး တော့ ပိုက်ပိုက် တော်တော် ထိသွားမယ်ထင်တယ် ။
ဒါတောင် ၊ အရင် ကျနော့် Post တွေဆို မန့်နေကျ ၊
ရွာထဲက Senior ရွာသူား ကြီးတွေ မလာသေးဘူး ။
တမင်များ ရှောင် နေကြသလားပဲ ။
အားပေးကြတဲ့ ရွာသူား အသစ် အဟောင်း ၊
ဘာမှ ပြန်မပြောတတ်လို့ မပြောပဲ လက်မထောင်ပြီး ထွက်သွားတာ။
ချက်ကျလက်ကျ တွေးခေါ်ပေးထားတာမို့ ထောက်ခံပါတယ်။
စဉ်းစားစရာ အတွေးတွေလည်း ရှင်းလင်းသွားပါတယ်။
လုပ်သင့်တာ လုပ်နိုင်တာကို စုပေါင်းပြီး အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်ကြရမှာမို့လည်း ၀မ်းသာပါတယ်။
လုပ်ချင်တာ လုပ်ဖြစ်တာကတော့ ဖော်ဝဒ်မေးလ်တွေ ပို့ပေးလိုက်တာပါပဲ။
ကိုဖေါရင်း ဆွဲထုတ်ပြထားတဲ့ အဆင်လေးက
အဲဒါ ဘယ်ပိုစ့်ဝင်ပြောရကောင်းမလဲဆိုပြီး ဓါးစာခံရှာနေတာ…
အဘဖောရေ ဟိုတနေ့ထဲက ၀င်ဖတ်သွားတာပါ။ ဖုန်းနဲ့ပဲ သုံးနေလို့ ၀င်မမန့်သွားဖြစ်တာပါ။
မနေ့ကတော့ fb မျက်နှာစာမှာ တင်ပေးထားတာပါ။ ပြောစရာမရှိအောင် ပြည့်စုံနေလို့ ဘာမှ ၀င်မပြောတာပါ။
လာထား ၁၀ကျပ် အင့် ၂ကျပ်
မောင်ဂီ ။ မောင်ဂီ ။
အဘ မပြောချင်ဘူးနော် ။ မင်းကလည်း မင်းပါပဲ ။
ဒီလောက် Comment တွေ အခု ၁၀၀ တိတိ ရှိတာကို ။
ဘဇာ ကြောင့် သမီး မိ Pooch ရဲ့အောက်တည့်တည့်မှာမှ သွားပြီး ၊
” သများလည်း သူပြောသလိုပါပဲချင့် ” သွားလုပ်ရသတုန်း ။
အဘရေ .. ပို့စ်ကိုဖတ်လိုက်မိမှပဲ … အတော်လေးစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုကောင်းတဲ့ အဘရဲ့ ဥာဏ်ရည်ကို …. မချီးကျူးပဲ မနေနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်မိပါတယ် ။ တွေးခေါ်ပုံကလည်း ဒေါင့်စေ့ပြီး လူအများ မမြင်နိုင်တာကို … ထောက်ပြနိုင်တဲ့ အတွက် လေးစားအထင်ကြီးစိတ်နဲ့ ဖတ်ရတဲ့ပို့စ်တစ်ခုပါပဲ … ။ဒီလို စာရေးသူတွေ ၊ ကော့မန့် ပေးသူတွေ ရှိနေတာနဲ့တင်ပဲ … ရွာသားဖြစ်ရကျိုးနပ်နေပြီလို့ ခံစားရပါတယ် ။
ပို့စ်ရေးသူက အရမ်းကောင်းအောင် ရေးခဲ့သလို … ကော့မန့်တွေကလည်း … အရမ်းပဲကောင်းနေတာကြောင့် … ဖေ့စ်ဘွခ်မှာ link ပေးပြီး ရှဲခွင့်ပြုပါနော် … ။ လူတိုင်း ဖတ်သင့်တဲ့ ပို့စ်မို့ … အများကို ဖြန့်ဝေချင်လို့ပါ ။ .. လက်မပိစိကွေးလေး ထောင်သွားခဲ့ပါတယ် အဘရေ … ။
albert tun says:
အဘဖောရဲ့ စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ်ကို အတော်များများဖတ်ဘူးပါတယ် ။Comment တော့မပေးဖြစ်ပါဘူး။
အခု စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် (27) ရိုဟင်ဂျာကိုဖတ်ပြီးတော့အတွေး တစ်ခုပေါ်လာမိလို့ပါ. . . ။
ရခိုင်ဘက်မှာ ဆူပူတဲ့ အရေးတွေ ၊ အခြေအနေတွေကိုထိန်းချုပ် ပြီးသွားခဲ့ရင် ကျန်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို
မြန်မာပြည်အနေနဲ့ ဘယ်လိုများ လုပ်ကြ / လုပ်ရ / လုပ်သင့် သလဲ ဆိုတာလေးလည်း အဘဖော ရဲ့ အမြင်ကို ဆွေးနွေးပေးစေချင်ပါတယ် ။
ဒီစာသားလေးတွေကိုသဘောတူတယ် ကျန်တာတော့ မပြောတတ်ဘူး
MahaDharmaRaza RazaDhipati says:
အမေစုက မလွဲမရှောင်သာ အစိုးရတပ်ကို ရှုံ့ချရ ။
လူနည်းစု အသတ်ခံရသူများဘက်က ရပ်တည်ရ လို့ မရဘူးလေ
့ဒီလိုဆိုရင် မြန်မာပြည်သူလူထု ကလည်း တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးသေရေး ၊ ရှင်ရေးဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ အမေစုက ရိုဟင်ဂျာသည် မြန်မာ နိုင်ငံ အ အဖိနှိပ်ခံ မြန်မာတိုင်းရင်းသားဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာဗုဒ်ဓဘာသာ တွေ က အနိုင်ကျင့်ပြီး သတ်နေပါတယ်လို့ ပြောရင်
မြန်မာပြည်သူလူထု ကလည်း မလွှဲမရှောင်သာ အမေစု ကို မောင်တောကို ပို့ ပေးရတော့မှပေါ့
ခင်ဗျား တို့ က ဖြစ်နိုင်တဲ့ possibilies တွေကို ထိုင်စဉ်းစားနေတယ်
မောင်တော က မွတ်စလင်မ်တွေ အ၀ိုင်းခံရတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ဆေးပေါ့လိပ်သောက်ရင်း အေးအေးလူလူ စဉ်းစားပါလား
diplomat တွေ ကို စားပွဲဝိုင်းမှာ ရှင်းဖို့ ထားလိုက်၊ လောလောဆယ် ရှင်းစရာရှိတာ ရှင်းရမယ်
ထောင်ချောက်ထဲ ၀င်မိမှာ စိုးလို့ ထိုင်ကြည့်နေရင် ရခိုင်လူမျိုးတွေ လူမျိုးတုန်း အသတ်ခံပြီးမှ ခင်ဗျားတို့ နိုင်ငံတကာရဲ့ အမိန့် တော် က ကျလာမှာ လေ
ဟုတ်ပြီ။ ခင်ဗျားပြောသလို၊ ပစ်လည်းမပစ်ဘူး။ ရခိုင်တွေ လည်း အသေခံပေးမယ် ။ မွတ်စလင်မ်တွေ လည်း မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ပုသိမ်အထိ မီးရှို့ပြီး ပြီ။ ဒေါ်စု က ရိုဟင်ဂျာ မြန်မာတိုင်းရင်းသား မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောမှာ သေချာလို့ လား။
တကယ်လို့ပိုမိုကြီးထွား မလာအောင် ပစ်သင့်သလောက် ပစ်မယ်ဆိုရင်ကော နိုင်ငံတကာ က ၀င်ရောက် စွက်ဖက်မယ်ဆိုတာ သေချာလို့ လား။ တရုတ်ကြီး အားကိုးနဲ့ မိုက်နေတဲ့ မြန်မာ အစိုးရကို ဒီအနောက် နိုင်ငံ က ၀င်မယ်ဆိုရင် ၈၈ က ၀င်ပြီ ပေါ့။ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားတယ်ဆိုရင် နာဂစ်စ်ဖြစ်တုန်းက ၀င်ပြီပေါ့။ ၀င်ချင်ရင် အလွယ်လေးပဲ။ ဘာလို့ ခုမှ ၀င်ရမှာလဲ
ဒေါ်စုနိုင်ငံတကာမှာ သူတော်ကောင်းမကြီးဖြစ်ဖို့ ရခိုင်လူမျိုးကို စတေးရမှာလား။
လုံးဝ ပဲ။ ဒါအမျိုးသားရေး၊ ပါတီနိုင်ငံရေးမဟုတ်တော့ဘူး။
ခင်ဗျားတို့ က ဒီမွတ်စလင်မ်တွေ ရဲ့ထောင်ချောက်ထဲ မ၀င်မိဘူးထားပါတော့။ ဒီကောင်တွေ က ဒီလိုနဲ့ ပြီး သွားမှာလား။
ငြိမ်နေမှာလား။ နောက်တစ်နည်းနဲ့ လုပ်မှာပဲ ။
စစ်တုရင် မှာ ခင်ဗျား က check mate လို့ ( ခင်ဗျားဘာသာထင်နေတာ) ထင်ပေမယ့် ခင်ဗျားကို ပြန်ပြီး ချက်မိတ် လုပ်သွားတဲ့ အခါမျိုးတွေ ကြုံဖူးလား။
အဘဖောရေ…တွေးခေါ်သုံးသပ်ထားတာလေးတွေအရမ်းကောင်းပါတယ်။ ဖောင်းဖောင်းမေးလ်ထဲကိုတော့ ဒီလိုလေးဝင်ထားပါတယ်။ အဘဖတ်ပြီး သုံးသပ်ပေးပါဦး…။
ဦးအောင်သောင်း သည် မြန်မာ နိုင်ငံ တွင် အချမ်းသာ ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက် ဖြစ် သည်။Facebook:Infinity Power
ဗျို့ အန်ကယ် ဖော ….
အခေါ်အဝေါ် ပြောင်းရတော့မယ် ထင့် …
သည်လိုဗျ ..အဘ သိထားသင့်တယ်ထင်လို့
အဘ ကို ပြောပြချင်လို့ပါ …အဘ ရယ်….
အဲ့သည့် အဘ ကိစ္စပေါ့ …
အဘ စာ က ခွစ်တစ်ကယ် တိုင်းမ် ခွစ်တစ်ကယ် မိုးမန့် ဖြစ်နေလေတော့..
အထက်က ရွာသူားတွေ ပြောတဲ့အတိုင်း ဟိုမှာ ယူမန့်
သည်မှာ ယူရှဲ ကြလေရဲ့ ….
ကျနော့် ပါတ်ဝန်းကျင်က လူတွေ တောင် အတော်များသေးရဲ့ ….
အော် ..ကျနော်လည်း ဂုဏ်ယူသည်ပေါ့ ….
အဲ … ဒါပေသိ သည်နေ့ လောက်ကျတော့ ..တွေ့ရတာ က…
အင်နိုဗေးရှင်းသမားတွေ ခည ….
ဖတ်ကြစေချင်တယ်.. တို့ ဘာတို့ ခေါင်းစဉ်ပြောင်း….
လေဒီ့ ဒါ့ပုံ နဲ့ တွဲ ပီး အဘစာ တွေကို ရေးတင်တော့တာ…
မှန်တာပြောရရင် ဒါမိုးတော့ နည်းနည်း ချဉ်တယ်လေ…
ခွက်ဒစ် လည်း မပေး ရွာ့လင့်ခ်လည်း မပြ ဘဲ ကိုယ်တိုင်ပဲရေးသယောင်ယောင်တွေ
လုပ်ထားကြတာကိုး ….အဲ့ဒါနဲ့ ဘာများပါလိမ့် ဆိုပြီး
အဲ့သည့် ရှဲထားတဲ့ နုတ်စ်လေး ဘာလေးတွေဝင်ဖတ်ကြည့်ပြီး သကာလ..
အဘ ဆိုတဲ့ ကီးဝေါ့ဒ် ကိုယ်တိုင် က ကိုယ် ရှော့ ရှိနေတော့သကိုး ..
အဘ ကို သမ ထားကြတဲ့ ကော်မန့်တွေ တွေ့ရတယ် ခည ….
အဓိက ကတော့ အဘ ဆိုတဲ့ စာလုံးကြောင့် …အဘ ကို ကြံ့ဖွတ် ထင်နေပုံရတယ်..
ရှဲ ဆြာတွေ ရဲ့ စာတွေ ရှဲဆြာ တွေရဲ့ အယူအဆ ရပ်တည်ချက်တွေ အများကြီး
အရောင်ဆိုး သွားနိုင်တာ ဆိုတော့ ရေးထားတဲ့ အကြောင်းအရာ အတွေးအခေါ် အယူအဆ ကို
မပေါ့သွားစေချင်ဘူးဗျို့ ….စိတ်ပူတာ …
နောက်တချက် စိတ်ပူတာက အထက်မှာ အဘပြောသလို
အိုင်ဒန်တတီ ကို မပေါ်လွင်ချင်ဘူး ဆိုတာလေးပါ..
အနှီ လက်ယာ သမားတွေများ ရွာထဲ ရောက်လာပြီး….
ဒါမှမဟုတ် အပြင်မှာ (ဖဘမှာ) စာရေးသူသို့ ဆိုတာမျိုးတွေ လုပ်ပြီး…
ပြောကြ ဝေဖန်ကြ ဆဲကြ ဆိုကြ မယ်ဆိုရင်ဖြင့် …
ရင်လေး တယ်ဗျို့ …
(ဒါကတော့ သဂျိုင်ခီး သိထားဖို့ ကိစ္စပါ…)
တွေ့ရင် တော့ ပြောပါ့မယ်ဗျာ ….
ဂီဂီရေ ။ အဘ လည်း တွေ့ပါ့ ။
Ko Nyan ဆိုသူက Face Book မှာ
“အားလုံးဖတ်ကြည့်စေချင်တယ်ဗျာ” ဆိုပြီး အမေစု ဓါတ်ပုံနှင့် ။
ဘာ Credit မှမပေးပဲ ၊ Foreign Resident နာမည်တောင် မပါဘူး ။
အဘရဲ့ အရင်နှီးဆုံး သူငယ်ချင်း လေးယောက်ကတောင် ပြန် ရှဲနေသေးတယ် ။
အဘ တိတ်တိတ်လေး နှာစေးနေလိုက်ရတယ် ။
သူတို့ကတောင် အဘကို ပြန်ထင်မလားပဲ ။
ဒီ ငတုံးကြီး ဘာလို့ ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ Post ကို ၊
ဘာလို့ ပြန်မရှဲသလဲ မသိဘူးပေါ့ ။
သောက်မြင် ကပ်ကပ် နှင့် ၊
ကိုယ်ပါဝင်ရှဲလိုက်ရရင် ကောင်းမလား မသိ ။
တချို့က သူတို့ရဲ့ Note မှာကူးတင်တယ် ။
တချို့က သူတို့ရဲ့ Status သေးသေးလေးမှာပါ အပြည့်ကူးတင်တယ် ။
တယောက်ယောက်က အဲဒီလို ရေးတင်ထားပြီဆိုရင် ၊
အဲဒါ တစ်ခု တစ်ခုချင်းကို ထပ်ရှဲတာကိုက ရာချီပြီး ရှိတယ် ။
အပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ Ko Nyan ရဲ့
Share လုပ်ထားတာ 731 ယောက် ရှိနေပြီ ။
မှန်တာပြောရရင် အဘ တောင်ကြောက်လာပြီ ။
MG မှာ စာတွေ ဆက်ရေးဖို့တောင် တော်တော် စဉ်းစားရတော့မယ် ။
အဘဖေါ့ရေ eleven မှာ အဘဖေါ့ရဲ့ပို့စ် ကို ကွန်မန်း ပြန်ပေးထားတာလေးသဘောကျလို့
ဇမ္ဗူတလူ 2012-06-12 14:14
“:”အမိ မြန်မာပြည် ကံကောင်းပါစေလို့ပဲ ၊
အဘ ယုံကြည်ပါတယ် ။ အာမခံပါတယ် ။””
ဟုတ်ပြီ။ သည်းခံလည်း ရခိုင်မြောက်ပိုင်းက အခုရိုဟင်ဂျာပိုင်နက်လိုလိုဖြစ်နေပြီ။ သူတို့အခုမောင်းထုတ်ကြလို့ ရခိုင်ရွာ ဘယ်လောက်ကျန်သေးလဲ။ သည်းမခံပဲ ပြန်ချတော့လည်း နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးဘာညာသာရကာ မြှောက်ထိုးပင့်ကော်တွေကြောင့် ရိုဟင်ဂျာဘက်ပဲ အလေးသာသွားမှာပဲ။ ဘာထူးမှာလဲ။ အဖြေကရှင်းနေပြီ။ ထိုင်းတောင်ပိုင်းက ပဋိပက္ခလည်း ဒီလိုပဲ။ ဒီလိုပဲ ကိုယ်ပိုင်ပြည်နယ် ခွဲထွက်ရေးတောင်းတယ်။ သူတို့ဆီမှာလည်း ကျနော်တို့ဆီက ရိုဟင်ဂျာအလားတူ၊ မလေး-မွတ်ဆလင်ဆိုတာတွေ ရှိနေတယ်။ သူတို့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာနဲ့ ဆင်တူတယ်ပြောရမယ်။ ထိုင်းမှာလည်း ဒီကိစ္စအခုထိ ရှင်းလို့မရသေးဘူး။ လုပ်ရမှာ တစ်နည်းပဲရှိတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံလောက် ပြဿနာကြီးမလာခင် တမီးလ်တွေကို သီရိလင်္ကာနှိမ်နှင်းသလို လုပ်ပစ်ရမယ်။ ပြည်သူတွေ အတိုက်အခံပါတီတွေ အစိုးရနဲ့ အတူလက်တွဲပြီးတော့ ကျူးကျော်လာသူတွေကို ချေမှုန်းရမယ်။ ဒါကြောင့် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ အခုနိုင်ငံတကာခရီးစဉ်မှာ ရိုဟင်ဂျာဘင်္ဂါလီတွေဘက်က မရပ်တည်ပေးဖို့ အရမ်းကို အရေးပါနေပါတယ်။
မနေ့ကထဲက အဘဖောပို့စ်ကို ကွန်မန့်ရေးတာ တက်သွားတာမတွေ့လို့ ဒီနေ့ထပ်ရေးလိုက်ပါတယ် …
အပြည့်အ၀ ထောက်ခံအားပေးပါတယ် ..
အဘဖောတွေးသလိုမျိုး မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးတွေးခေါ်ပေးနိုင်ရင် သိပ်ကောင်းမှာမို့ များများရှယ်ပေးနိုင်လေ ကောင်းလေလို့ပဲ မြင်မိတယ် …
ကျွန်မသူငယ်ချင်း ရခိုင်လူမျိုးတွေကပြောဖူးတယ် … ကျွန်မတို့ရန်ကုန်လိုမြို့တွေမှာ မြင်ဖူးနေတဲ့ အဆင့်အတန်းရှိတဲ့ အစ္စလာမ်တွေ မူဆလင်တွေကို တွေ့ဖူးပြီး အားလုံးကို အဲဒီလိုပဲလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့တဲ့ … တကယ့် ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ မူရင်းဇစ်မြစ်နဲ့ သူတို့လုပ်ရပ်တွေကို သူတို့နဲ့အတူကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေသာ အသိဆုံးပါတဲ့ … ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်နဲ့ လူမျိုးရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်မှုကြောင့်သာ ယနေ့အထိ ရခိုင်လူမျိုးနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုတာ ကျန်ရှိနေတာပါတဲ့လေ …
ကျွန်မတို့လို မြို့ပေါ်မှာနေ စာတွေပဲဖတ်ပြီး လက်တွေ့ကျကျ မစဉ်းစားနိုင်တဲ့သူတွေအတွက် ဦးဖောတို့လို စဉ်းစားတတ်သူတွေရဲ့ စာပေများက မျက်စိပွင့်စေပါတယ် … များများစဉ်းစားပြပေးဖို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ် ..
လက်မတွေ တစ်ထောကြီးနဲ့ အဘဖေါကြီးရဲ့ ပို့စ် လို့ ခေါင်းစဉ်တတ်လိုက်ပါတယ်ဗျာ။
မကျွမ်းကျင်တဲ့ ကိစ္စဆိုတော့ ၀င်မပွားတာပါ။
အခု လက်မ ၃၀၁ ချောင်းထောင်ထားတယ်ဆိုကတည်းက
အဘဖော ရဲ့ ဒီပိုစ် အကြောင်း သတင်းကြားလို့ ဒီနေ့မှ ရှာဖတ်မိတယ်။
လက်မ ထောင် ထားတဲ့ ၃၁၅ ရှိပါတယ်။
ဆူး ရဲ့ ၃၁၆ လက်မ တက်သွားတယ် ထင်ပေမဲ့ ခဏနေတော့ ကြည့်တော့ မတက်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။
အဘဖော ရဲ့ အိုင်ဒီယာ အတိုင်း ဆက်တွေးမိတာတော့.. တိုင်းရင်းသား ခံခွင့်ပေးလိုက်ရင် လွတ်တော်ထဲ ၀င်မယ် အမတ်လုပ်မယ် ပြီးတော့ သမ္မတ လုပ်မယ်။ နောက်ထပ် မျိုးဆက် တဆက်မတိုင်ခင်မှာ မူဆလင် နိုင်ငံတော် အဖြစ် ကြေညာခြင်း ခံရမယ် အဲလို ဖြစ်သွားမှာ စိုးရတယ်။ မြန်မာပြည်က ဘိုးဘွားတွေ တည်ထားတဲ့ ဘုရားတွေ တာလီဘန်မှာ ဖျက်ဆီးသလို ဖျက်ဆီးတာမျိုးတွေ ဆက်လို့ ဆက်လို့..
မြန်မာပြည် လတ်တလော အခြေအနေအရ ပြည်တွင်း မီဒီယာတွေကပဲ မြန်မာပြည် နောက်ကြောင်း ပြန်မလှည့်စေဖို့ ယူအန် က ဖိအားမပေးစေဖို့ ၀ိုင်းပြောသင့်တယ်။
နောက်ကြောင်း ပြန်လှည့်ခဲ့လျှင် ဆိုပြီး ၂၀၀၇ တုန်းက ပုံတွေ နဲ့ ပြန်လည် လှုံဆော်သင့်တယ်။
ဒီမို အော်တဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေ ခြိမ်းခြောက်တဲ့ အကောင်ဆို သိပ်ကြောက်တယ်လို့ မြင်မိတယ်။ အရင် စစ်အစိုးရ လက်ထက်တုန်းက သူတို့ ဘာပြောပြော ဂရုမစိုက်တော့ ပြောရင် လေသံက အောက်သက်ကနေ ချော့ခေါ်တယ်။
အခုမှ မြန်မာနိုင်ငံက ကလေးပေါက်စ အရွယ် ဖြစ်နေတော့ ၀ိုင်းပြီး ပုံသွင်းဖို့ ကြိုးစားနေတာ ခေါင်းမာ သင့်တာ ခေါင်းမာ မှ ဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။
ဥပမာ အငိုသန်တဲ့ ကလေး များများ နို့စို့ ရတယ် ဆိုတဲ့ စကား အတိုင်းပေါ့..
ဘယ်လောက် ချော့ချော့ မရဘူး.. ဖြစ်ချင်တာ ရချင်တာ မရမချင်း ငိုတတ်တဲ့ ကလေးတွေကို လူကြီးတွေက အလျော့ပေးရမြဲပါပဲ..